Fabrizio Rioli D.J. ⋆ အင်ဒရူး Firenze
ကျနော်တို့ဂီတအကြောင်းပြောဆိုနှင့်အရှိဆုံးကမ္ဘာညနေခင်း၏အပျော်အပျက်များနှင့်ဆူညံသော Florence နေထိုင်သောအခါ, ဒီပတ်ဝန်းကျင်၏ဒဏ္aryာရီအမည်များကိုတစ် ဦး ကကူညီပေမယ့်ဖော်ပြရန်လို့မရပါဘူး.
Fabrizio Rioli သည်အခြားမည်သည့်အရာထက်မဆိုအမှတ်တရအခိုက်အတန့်များနှင့်ဒစ်စကိုနှင့်ဂီတမှကူးယူထားသောကြီးမားသောကလပ်များတွင်စီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်သည်။ 120 bpm တက်သည်.
သို့သော် Rioli D.J သူကားအဘယ်သူ. ?
ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်သူ့အားတိုက်ရိုက်မေးမြန်းရန်နှင့်၎င်းကိုလုပ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းမရှိပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည်သိုလှောင်ထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုခိုးယူသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေခဲ့သည် Rioli Planet ဂီတ, အနုပညာရှင်၏ညနေခင်းများနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုစီမံခန့်ခွဲသောကမ္ဘာတစ် ၀ န်းမှလာသည့်တောင်းဆိုမှုများကိုစီစဉ်ပေးသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်.
Rioli Planet Music မှာငါတို့တွေ့ခဲ့တယ် Tarker Homan, သူ့ကိုယ်သူ Rioli D.J. ၏ဘယ်ဘက်လက်ကိုခေါ်သူလုပ်ငန်းရှင်, Warner နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံသောသူ, la Believe, Sony မှတ်တမ်းများနှင့်အခြားသူများ.
Rioli D.J. သူ့နောက်ကွယ်ကဒီကြီးမားတဲ့ယန္တရားရှိနေပေမယ့်သူဟာရိုးရှင်းပြီးရင်းနှီးတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်အမြဲတမ်းရှိနေဆဲပါ, အားလုံး၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်သစ္စာစောင့်သိမှု၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ရှိသူမည်သူမဆိုအားသူ၏အံ့သြဖွယ်ညနေခင်းများကိုကမ်းလှမ်းရန်ပါ ၀ င်ရန်အမြဲလိုလိုဆန္ဒရှိသည်. Tarker သည်တာဝန်အရှိဆုံးရွေးချယ်မှုများအတွက်အပြည့်အဝတာဝန်ယူသည် “မကောင်းဘူး”, ထိုကဲ့သို့သော Rioli D.J ၏ခံစားချက်နှင့်မစ်ရှင်နှင့်အညီမဟုတ်သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နေရာငြင်းပယ်အဖြစ်.
တစ်ညနေခင်းမှာသူ့ကိုကျော်ကြားတဲ့ပါရီနိုက်ကလပ်က DJOON ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်. Jjoon စာသားဆိုလိုသည် “anima” နှင့်ဤအရပ်ဌာနကိုစိတ်ဝိညာဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်. Seine နှင့်ဝေးကွာသောနေရာတွင်ရှိသည်, 13 Arrondissement ၌တည်၏, Djoon သည်ဒီinရိယာတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောကလပ်အသင်းများထဲမှနောက်ဆုံးမွေးဖွားလာသူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ Avant-garde အစည်းအဝေးနေရာများကြောင့်ကျော်ကြားလာသည်။. အများကြီး Afro-house ဂီတပရိတ်သတ်တွေကချစ်ကြတယ်, နယူးယောက်မော်ဒယ်များမှလှုံ့ဆော်ပေးသောဤခေတ်ပြိုင်ပုံစံခေါက်ကလပ်သည်မမေ့နိုင်စရာကောင်းသောဂီတညများကြောင့်လူကြိုက်များခဲ့သည်, Funk, နက်ရှိုင်းသောအိမ်, ကားဂိုဒေါင်နှင့် disc ကို. ၎င်းသည် Chez Damier ကဲ့သို့သောနိုင်ငံတကာကြယ်များကိုလက်ခံကျင်းပဆဲဖြစ်သည်, Louie Vega, Lil ‘လူးဝစ်, Kerri Chandler အီးက Black ကော်ဖီ. နေရာသည်အလွန်ကျယ်ဝန်းပြီးလှပသောဖန်သားနှင့်သံမဏိမျက်နှာပြင်များရှိသည်.
ကျနော်တို့ထို့ကြောင့် Rioli D.J ကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်. သူကခုန်ည ဦး ယံမစတင်မီသည်သူ၏သောက်ရင်းပြီးဆုံး, ဗဟိုခုံတန်းရှည်ထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်. တစ် ဦး ကသွေးဆောင်အခွင့်အလမ်း!!
ငါတို့: “တဆိတ်လောက်, ဒီဒဏ္legာရီ Rioli D.J ဖြစ်ပါတယ်. ?”
Rioli: “သေချာတယ်, အဲ့ဒါငါပဲ. andriusmusic.com ၏အရူးဖြစ်လျှင်အဘယ်ကြောင့်ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုစကားပြောပါသနည်း?”
ရယ်မောခြင်းကအကွာအဝေးကိုလျှော့စေသည်, Fabrizio ကကျွန်တော်တို့ကိုချက်ချင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအီတလီကိုဆက်ပြောသည်.
ငါတို့: “မင်းတို့ကိုမင်းတို့ကိုပြောပြခိုင်းတာပေါ့? ဥပမာ၊, သင်ဒီမှာပဲရစ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့တာအမှန်ပဲ?”
Rioli: “မဟုတ်ဘူး, မဟုတ်ဘူး… io preferisco Scandicci, အဆိုပါ Viottolone နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများ”.
Rioli: “ငါမကြာခဏသြစတြီးယား neocytationism ကိုရည်ညွှန်းသည်”.
ငါတို့: “အဘယ်သူသည်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုအများဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့သည်? သင်မည်သို့ Rioli D.J ဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့. ?”
Rioli: “သေချာတာပေါ့ငါ့အဒေါ်, ဟုတ်တယ်ငါ့အဒေါ် Villa နဲ့ Modugno မှတ်တမ်းတွေကိုတင်ရတာကြိုက်တယ်, ဒီမှာ, ငါသူမကိုအရမ်းလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်ထင်တယ်”
ငါတို့: “Calvin Harris သည်သင်နှင့်ပူးပေါင်းရန်သင့်အားဆက်သွယ်ခဲ့သည့်အချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မှန်သည်?”
Rioli: “ငါမသိဘူး, ငါသူ့ကိုသိတယ်မထင်ဘူး… è un emergente?”
ငါတို့: “E ကို’ သင်ထုတ်လုပ်သောသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုနောင်တွင်ထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည် အင်ဒရူး Firenze?”
Rioli: “အဲဒီမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိပေမယ့်တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုရှောင်တာကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေခဲ့တယ်, ရှယ်ယာမှာကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွားရှိပါတယ်”.
ငါတို့: “မင်းရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုမှာမင်းကိုမကြာခဏနာမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့ကလပ်တွေမှာဖျော်ဖြေဖို့လက်ခံခဲ့တယ်, ဒီထူးဆန်းတဲ့ရွေးချယ်မှုကိုဘယ်လိုရှင်းပြနိုင်မလဲ?”
Rioli: “ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှသတိမထားမိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်အားအသိပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူကြိုက်များမှုနည်းတာကငါ့အိမ်နဲ့သိပ်မဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ..”
Rioli: “အဲဒါကိုစွန့်လွှတ်ပြီးအခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ, ဥပမာအားဖြင့်ခရမ်းချဉ်သီးများရိတ်သိမ်းခြင်း, ငါ့အမြင်အတွက်အကောင်းဆုံးနေသောဖြစ်နိုင်သည် San Marzano ။”
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ Rioli D.J ကိုခွင့်ပြုတဲ့အမှောင်မျက်မှန်နဲ့နားကြပ်တွေနဲ့ကြီးမားတဲ့ကိုယ်ရံတော်နှစ်ယောက်ကနှောင့်ယှက်နေတယ်။. လွတ်လပ်စွာ console ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်.
E ကို’ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံဖြစ်ခဲ့သည်, ငါတို့ကသူနဲ့နီးစပ်နိုင်မယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး, ပြီးပြီ.
Facebook ပေါ်ရှိ Rioli DJ ကိုလိုက်နာပါ
အင်ဒရူး 11 သြဂုတ်လ 2020 . No Comments on Fabrizio Rioli D.J.. Categories: reviews, ထက်တောင်ဦးနှင့်လက်ရှိ. Tags: fabrizio rioli, fabrizio rioli dj, rioli dj.
အရေအတွက်က Enter 817: မှန်ကန်သောအရေအတွက်အားရိုက်ထည့်ပေးပါ